Hatingagoni kugadzirisa matambudziko munyika kuburikidza nekufunga uye kutaura, asi nenzira iyi: Martin Vrijland
Hatingagoni kugadzirisa matambudziko munyika kuburikidza nekufunga uye kutaura, asi nenzira iyi:
Akaiswa mukati THE SIMULATION	by Martin Vrijland	pana 21 June 2019	• 3 Comments
Pakutanga ndakataurira vhidhiyo kubva kuna Roald Boom, iyo ini ini ini ndisingazivi, asi iyo yandakatarisa video ye YouTube pamberi pe 1x. Muhurukuro iri pasi (iyo yandakagamuchira), Roald anoswedera pedyo nechinangwa chekudya kwangu. Anotaura kuti mashoko eEinstein 'Hatikwanise kugadzirisa dambudziko kubva muhutano hwakafanana hwekufunga"inofanira kuchinjwa kuva"Hatikwanise kugadzirisa dambudziko kubva muhutano humwe hwekuziva". Anotaura nenzira yakanakisisa uye yakajeka yandakaedza kujekesa mumashoko angu emakore achangopfuura, apo ini ndinotanga kuedza kumutsa muverengi kubva kune avo vanobatanidza nehutano hypnosis uye voita kuchinja kune imwe nzvimbo inokosha yekuziva. Ndicho chikonzero ini ndinoda kushandisa vhidhiyo yake pano, yandinoda kupa mamwe mawedzera, kuitira kuti iwe unotarisira kuona mufananidzo zvachose.
Ndeipi nzvimbo yedu uye hupenyu hunobva kupi?
Nokuda kwekunzwisisa kwakanaka ndiko kutanga kunobatsira kurondedzera chinangwa chekubva kwedu. Ndinokukumbira kuti uise zvaunotenda zvenguva pfupi muimba yekurindira kuti uwane chiedza. Iwe unogona kutenda mumwari wekusika kana guru guru. Pane chokwadi mune zvose zviri zviviri. Chokutanga, ngatitangei kufunga; chete nokuda kwekushanda, kuitira kuti ndinogona kudzokera kune 'zvakasikwa' kana kuti 'big bang' zvitendero. Ngationei kuti mhedzisiro yezvinhu zvose ihwo huwandu hwehuwandu hwemashoko kubva pane izvo zvose zvakagadzirwa uye kuti izvi zvose-kusanganisira kubuda kwemashoko ndezvakakonzerwa nekugadzirisa kwakaitika. Ngatitaurire kuti iyo rudzi rwegungwa rwezvinhu zvose uye zvingagona izvo zvine zvinhu zvose kubva munhau kusvika kune simba, kugadzira nekusaziva. Rudzi rwechigadziro chesero chekuvapo, zvisikwa nezvose zviripo. Kuenzanisa uku nechekuita sero ndiyo imwe yakanakisisa iripo, nokuti zvinogoneka sei kuti iyi shini yesero mumuviri wemunhu zvechokwadi inewo mashoko ose ezvo chikamu chose chemuviri. Saka iyo Roald Boom inodana 'quantum munda' muvhidhiyo iri pasi apa, ndinoda kubatanidza neshoko iroro 'stem cell'. Yeuka izvi stem sekufananidza kuenzanisa kana iwe uchiona vhidhiyo.
Zvisikwa kana big bang?
Kana tikafungidzira kwechinguvana kubva kune iyo tsvina yesero yekuvapo (ini ndinozviidza kuti kwete iyo yepasi rose, pamusoro pei zvimwe zvakadaro) chimiro chave chakaumbwa, saka mubvunzo wakakosha unoti: "Izvozvo zvakagadziriswa sei masero?" Saka: "iyo yose yakabatanidza sei ruzivo rwemashoko (iyo quantum munda) inotangira pane zvinhu zvose zvakaumbwa?"
Mumuenzaniso wakataurwa pano (fungidziro yekufunga) Ndinofungidzira kwekanguva kuti masangano ega akaumba (masero). Somunhu masimba masimba ayo anotova nechido chekupa mamwe maitiro. Chitendero chiri mupfungwa iyoyo iri pedyo nechokwadi, nokuti pano zvakare inotaurwa nezvevamwari, vatumwa nemadhimoni (mumwe munhu masimba, mafomu, masangano). Nokuda kwekusununguka, ngatitumidze iyi 'masero ega' kana kuti 'vakagadzira'. Ndiri kuita zvikwata zvakakura pano, asi kana tikafunga kuti zvichaitika kubva pane 'zvose' ('iyo yose inosanganisira code code', iyo 'simba renyika simba' kana kuti 'chitubu chemashoko ekuyerera', 'quantum field') chimiro chinomuka, saka kuenzanisa kwakanakisisa kwatinazvo kune izvi munyika yedu yepanyama ndiyo stem cell.
Kutsvaga kugadzirisa kodeti yose yekumbundira mukati memusero chetemu chimwe chinhu chatinogona kuisa, asi zvinoitika. Mitsara inotanga nzira yavo yekugadzira nemashoko kubva pa stem cell. Saka tinogona kutaura kuti izvo zvose-zvakapoteredza 'ruzivo rwekuziva ruzivo' zvinowanzotanga kupa chimiro (kuumba). Izvi zvose-zvakapoteredza ruzivo rwemashoko zvinogona kunge chiri chirevo chekuvapo kwedu. Mwari kana zvikwata (zvishoma: izvo zvatinodaro saizvozvo kubva kune zvatinoona pasi) zvino ndezvakaguma zvekuti zvose-zvakapoteredza ruzivo rwemashoko. Izvozvi zvatove mafomu. Izvozvi zvatove zvinozivikanwa "masero" akaumbwa kubva pa stem cell information flow.
Kuti tipindure mubvunzo iwoyo kana tiri kurarama mune zvakasikwa kana mune zvakasikwa zvakasikwa nekushanduka-shanduka, kubva kune guru guru, tinofanirwa kutarisa inonzi physics. Kuedza kwakapetwa kaviri nemasayendisiti chaiwo Niels Bohr akazunungusa basa raEinstein pane 'Theory Of Everything' (TOE) kune nheyo dzayo. Icho chakatoita zvachose nharo dzeEinstein (dzakadai sedzidziso yenharaunda uye nekukurumidza kwechiedza-se-muganhu semugumisiro wezvinyorwa zvinowanikwa mumatambudziko). Niels Bohr akaratidza pamwe chete izvo zvakapetwa kaviri kuti mutariri anodiwa kuti aumbe nyaya. Izvo zvisati zvadaro, inongova mashoko epahomwe. Izvi zvinotungamirira kumhedziso yatiri kurarama muchokwadi chekufananidzira (uko 'kugara mukati' hakusi kunyatsorongeka kwakarurama), mune imwe kunze kunze mutambi anoziva (mumutambo wemufananidzi anoenzanisa). Izvo zvakanyatsopindirana zvechirevo ichi zvinogona kuwanikwa munyaya dzino dzakatevedzana (ona pano en pano).
Zvino kana zvichibva kune "stem cell" mashoko anoyerera (izvo Roald Boom anodana "inowanzo munda") "fomu" yakagadzirwa, saka tinogona kudana iyi "fomu" masero ekusika akazotangazve kushandiswa kwezvisikwa (semu miviri yomuviri nhengo). Saka tinogona kutaura kuti iyi mafomu akaita ita maziviro edu. Mushure mekusava nemafuta ekugadzira data (streem cell yekuvapo, iyo yenhamba munda), 'fomu' yakaumbwa. Tinogona kudana iyo yekutanga 'chimiro' 'chizivo' kana 'mweya' kana 'sangano'. Aya ose mazwi anosvibiswa mumasangano emweya uye echitendero, asi ngatitorei 'kuziva' kuitira kuti tive nyore fomu izvo zvakaumbwa. Saka kutanga kwaive 'nezvose' uye zvakare kuziva. Kuziva ndeye chimiro chomunhu oga chakaumbwa kubva pa stem cell. Zvisinei, zvose zviri zviviri nokuti imwe ndiyo mhinduro yeimwe, asi sero haigoni kuumba pasina stem cell information (iyo yose-inosanganisira ruzivo rwemashoko). Zvose izvi zvinogara zvichipo panguva imwe chete.
Mune basa iri rekuita mari usiku tichaita kuti kusvetuka kudiwa kwechikwata (chizivo / fomu) kupa mimwe fomu (kuumba nhengo). Iye zvino tinoziva kubva pane zvatinoona nezvehupenyu hwedu kuti masero akaipa anogonawo kuumba. Kana tikatarisa muviri wemunhu, hazvina kukwana zvokuti hatinorwara. Zvisinei, hutachiwana hunogonawo kuedza sangano uye kuwedzera kushorwa.
Muchiito chekufungidzira kwedu, ngatitorei kwechinguva kuti pfungwa yedu yakave yakagadzirwa zvakananga kubva mumutsetse wekodhi (the stem cell / quantum field) uye kuti isu tose tinobva kune imwe yenhamba yakaenzana, asi vose vane basa rakasiyana. Mushure mezvose, mumuviri mumwe sero imwe yakagamuchira purogiramu inokosha yehuwandu kubva pane stem cell kuti igadzire nhengo uye imwe imwe nhengo. Isu isu tiri wehutano hwakaenzana, asi kwete zvakafanana, nokuti tine basa rakasiyana rekugadzira.
Kana wakadzidza nyaya dzangu pamusoro pekuenzanisa, ndinoda kuratidza kuti zvinoratidzika kune chimwe chinhu (chimiro chekuziva) chinoita sechine basa rekuvaka chirwere chetachiona. Chirongwa chemuedzo wemuviri wose wakagadzirwa kubva pa stem cell. Ichi chimiro chaLuciferian chokuziva chakavaka (virusi) kuenzanisa. Mushure mezvose, physics yakawanda inoratidza kuti isu "tinorarama" mukuenzanisa (kuona / kutamba). Mukudaro, Lucifer ndiye mwari (muvaki) wekufananidza uku. Izvo zvinotsanangura zvose nyaya yekusika uye guru guru nyanzvi kune imwe huru kana zvishoma. Muchiitiko chebhanga guru iwe unogona kutaura kuti iyi ndiyo nguva apo kuenzanisa kwakashandurwa. "Zvisizvo!" Pakarepo zvinhu zvose zvakanga zviripo. Zvisikwa Nhoroondo zvinotsanangura zvikamu zvinoumba kuenzanisa (kutanga chiedza uye rima, ipapo denga, nyika, nyika, gungwa, nezvimwe zvakadaro). Dzidziso yekushanduka-shanduka inogona kufananidzwa naSims avo vari munyika yavo yeSims (ona pano) kutsvaga mhedzisiro yehupo hwavo uye edza kuita nhoroondo yekuongorora kubva kuSims kuziva uye kunzwisisa.
Kana iwe ukadzidza zvinyorwa zvangu, unogona kuziva kuti tiri mumusuwo chimiro chekuziva (ndiani anoremekedzwa se "mwari" kubva kuSims yedu chaiye uye anogona kuonekwa se) Lucifer yakavakwa virusi simulating life. Iwe unogonawo kunzi iyo test system; chirwere chetachiona chinotarisirwa kuedza imwe nzira dzekusika dzekuziva (masero). Isu tinogona kuziva kwete kungove yakawanda yefizikiki yeruzivo yekuti inoenzanisa nehutachiona hwehutachiona hwehutachiona, asiwo script uye twese. Ndinotsanangura izvozvo ichi chinokosha chinokosha (Ndinonyatsokurudzira kuti iwe uverenge icho icho chinyatsocherechedza).
Izvo zvose-kugumburwa kwemashoko anoyerera, iyo yenhamba yakawanda
Roald Boom anodana izvi zvose-zvakapoteredza ruzivo rwemashoko (izvo takafananidza nesero rekushandisa kuti rive nyore) iyo yenhamba yenhamba. Saka mushure mekuwanda kwemaunda inouya inobata. Iine shoko rokuti 'single', rinoreva 'munhu'. Kana tikatarisa sero rekusimudza uye kuti zvakasiyana sei masero ane mabasa akasiyana akasiyana mumuviri kana muhupenyu hwehupenyu hwose, saka ivo maitiro evanhu; ega ega masangano akaumbwa kubva kuhuwandu hwemunda (i stem cell sensational flow flow). Pano, iyo haisisiri seimwe. Izvo inenge yakasiyana yakagadzirwa basa semumwe. Kana chirwere chetachiona chechimiro chakaumbwa nesangano raLucifer chinotarisirwa kuedza mamwe masero kuitira simba ravo, saka tinogona kuwana code mumunda wechipumusi unogona kukonzera hutachiona kuputsika.
Pashure pezvose, isu tose tinotangira kubva kune iyo yose-inopoteredza dhizinesi rekutsvaga (iyo inow field / stem cell information stream). Saka kana tikaedza kugadzirisa zvinetso zveSims kufananidzwa kubva pane zvakaitika kuSims kana avatar inosangana nazvo, isu tiri kuchinja mutambo kubva mukati. Izvozvo hazvibviri. Muvaki wekufananidza achagara achiita kuti 'chirongwa' chibudirire. Mafungiro ako uye uropi yako zvakare chikamu che Sim yako mumutambo; iyo avatar yako mukuenzanisa; muviri wako kuona. Iwe hausi muviri wako: iwe unoziva (chimiro chisina kumira icho chakabva ku stem cell information flow flow / quantum field). Nzira chete yekugadzirisa kana kurega kuenzanisira ndeyokuita izvi pachirongwa chepurogiramu. Izvi zvinoitika pausingaoneki (level / munhu mumwechete fomu fomu), apo mapoka ose ehurumende akaenzana asi ane basa rakasiyana. Kubva pane iyo nzvimbo tinokwanisa kutora pahutano ruzivo ruzivo.
Utachiona hwetachiona pahutano hwepamusoro
Iwe unogona zvakare kutaura kuti hatifaniri kunetseka pamusoro pezvinetso zviri mukuenzanisa uku, hazvina kuita nekuda kwehutachiona hwehutachiona: kukunda nekugadzirisa. Mumuviri wako unogonawo kupona kurwisa hutachiona. Nzira yako yekuziva (mweya kana chipi zvacho chaunoda kuitumidza) inogonawo kupona kurwisa kwehutachiona. Zvisinei, tinofunga kuti tinofanira kuita izvozvo paSims avatar level. Izvozvo funga Zvisinei, iyo pachedu iyo Sims level. Icho chikamu chehutachiona hwechirwere ichi. Kukunda kwehutachiona huri kuitwa kuburikidza nekurwisa sero retachiona. Kwete kubva mukati, asi kubva kunze. Iyo Lucifer inoumba sangano, iro basa rayo raive yekuedza imwe mhando dzekuziva kwemasimba avo uye iyo yakagadzira hutachiona hwechirongwa ichi, saka inofanira kusungirirwa pane imwe nhengo yehurumende. Saka izvozvo zvinoitika pamwero wekuziva.
Kana Roald Boom akati maitiro ose akafanana, saka izvi zvakanyatsokwana. Itorere mumufananidzo wemutambo we Playstation kana mutsara weSims wataurwa pamusoro apa. Ngatitangei kuti nhengo dzakawanda dzekuziva (mweya kana chero chipi zvacho chaunoda kuzvidana) chave chakakwevedzwa muhutachiona hweLuciferian. Ndivanaani vatambi vemutambo wemutambo akadaro? Ndivanaani vari vatambi vemutambo wePlay player kana Game Sims. Ava ndivo vanhu vari kutarisa pahwindo nemutongi ari pamubhedha. Saka maziso ako anotarisa uye anotamba pamwe chete nehutachiona hwehutachiona hwehutachiona, asi panguva imwechete inobva ku stem cell cell quantum. Iwe unenge uchiri kuziva uye iwe uchiri muwandu yemunda. Icho chinonyanya kukosha chegadziriro yezvinhu zvose chiri muhuwandu hwemunda.
Kuti uzviise zviri nyore, mifananidzo inotevera inogona kunge iri: Kana iwe ukaita typo pachikona chako, unoisa typex pachikwangwani, tora eraser, uye edza kubvisa tsamba pahwindo rako kana kuchinja pazwi remushandisi wezwi? Saka tinofanirwa kuwana mhinduro mumutengo wechiramu. Ndokusaka ndichifunga kuti vhidhiyo iri pasi apa yaRoald Boom yakakosha zvikuru.
Kushandiswa kweshoko rokuti "kusina" kwakagamuchirwa nemhepo inotenderera ye transhumanism uye iri kukurudzirwa nevanhu vakaita seGoogle technic chief Ray Kurzweil. Iyi ndiyo nharo yeRififerian virusi simulation system, umo nzira yekudzokera kune imwe chete inokurudzirwa kuburikidza nenzira ye fusion nehutachiona. Zvose izvi zvinofanira kuitika kuburikidza nekukanganiswa neAI uye kuchinja zvishoma kwemuviri wemunhu avatar mu cyborgs iyo inofanira kuguma mugore neDNA neuropi. Saka nyevero yangu ndeyekuti hatifaniri kushamwaridzana nehutano huno uye huno husingarevi, kana nechitendero, nokuti tinozobatanidza isu kune utachiona hweLuciferian hunoda kuzvidzora pachedu mumunda wechipum. Tinokwanisa kubvisa chirwere chechirwere ichi chaLuciferian kubva pamwero wekuziva, yakachena uye iyo yakawanda yenhamba. Saka mazano angu akafanana neaya aRoald Boom: Ive wakanyarara zvakanyanya uye uyeuke mafungiro ako.
Ndinocherechedzawo kuti 'zvinhu zvose' chikamu chechi Luciferian chiitiko chekuenzanisa (sekufanana nengirozi, madhimoni kana jinns dzinotaurwa pamusoro apa: ona pano), asi kana zvakadaro ndinoda tsanangudzo yaRoald.
Kune vaverengi vakawanda, zvataurwa pamusoro apa zvingave zvisinganyatsotauri mutauro. Kune mweya inoziva, penny inogona kuwira.
Vanhu vangataura sei nezve "kuziva" uye panguva imwechete kubatsira kuchengetedza urongwa?
Izvo zvakakanganiswa zvinyorwa zvekutengesa
Kana uprofita huchizadzikiswa, ihwohwo uchapupu hwokuti iwe unotenda ndeyechokwadi here?
Vanhu vazhinji vanokupoteredzai vanoratidzika chaizvo (miviri isina upenyu) here?
Tags: kuziva, level of consciousness, tiguu, funga, denkniveu, Featured, pfungwa, quantum field, lucifer, danho, big bang, Chitendero, Roald, Roald Boom, Zvisikwa, simulation, singularity, Video, zvakafanana
21 June 2019 pa 16: 32
Vatambi venyika pasi rose muAI agenda iyi idd Kurzweil, asi zvakare Eric Schmidt (Alphabet) naPeter Thiel. Mifananidzo yekuchengeta ziso ...
Kuti usvike pamucheto wezivo yenyika, tsvaka pfungwa dzakaoma kunzwisisa uye dzakanyanyisa, uzviise muimba imwe pamwe chete, uye kuti vabvunzane mibvunzo yavari kuzvibvunza ivo pachavo.
22 June 2019 pa 15: 02
zvinonakidza zvinosanganisira salmon, ingoona kuti Mengele Plasterk inofanirwa kushanda sei ... Impatient / Mytommorows
Mapurogiramu Epakuvamba Okusvika 😀 achishamisika kuti vangani nano particles dziri kuongororwa
JV akanyora kuti:
23 June 2019 pa 18: 06
Ndinokutendai nokuda kwechigadziko chinovhenekera, chimwe chidimbu chinopisa!
« Anja Schaap akawanikwa afa pamhenderekedzo yegungwa pamusoro peWadden Islands, asi nechikepe chipi (myshiptracking.com)?
VaDutch havasi kuziva mamiriro avo ezvinhu: muedzo wejeri reStanford »
Total Visits: 16.004.033
guppy op Utachiona hwe corona ('Wuhan virus') ine chiRungu patent: nhamba EP3172319B1
Wilfred Bakker op Utachiona hwe corona ('Wuhan virus') ine chiRungu patent: nhamba EP3172319B1